You can easily withdraw funds from your TopSlotSite account, အချိန်မရွေး, through the different payment methods available, by following the below instructions:
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ to view our Withdrawal Policy
Below are the methods which you can use to withdraw funds from your TopSlotSite account. အားလုံးထွက်ငွေသားတောင်းဆိုမှုများအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးခြင်းကိုခံရ ကျေးဇူးပြု. "လာမည့်" ဘို့3Business days, during which time you can cancel the request.
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day6business Days £20 / €20 / $20 / 200 Kr Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day 1 business Day £20 / €20 / $20 / 200 Kr Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day 2-5 business Days £20 / €20 / $20 / 200 Kr Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day 1 business Days £20 / €20 / $20 / 200 Kr Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day 4-10 business Days £50 / €50 / $50 / 500 Kr Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day3business Days £50 / €50 / $50 / 500 Kr Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day3business Days £20 / €20 / $20 / 200 Kr Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day3business Days €20 / $20 Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
3 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး 1 business Day 4-10 business Days £50 / €50 / $50 Olorra Management Ltd / ProgressPlay Ltd
After3စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး, the status of your withdrawal request will change to "Processing" and you will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once your request has been delivered and the funds have been transferred to you.
အကောင့်နှုန်းအမြင့်ဆုံးဆုတ်ခွာငွေပမာဏသည် (ကိုယ့်) £3,000 / €3,000 / $3,000 / 30 000 တစ်ပတ်ကို Kr, and (ii) £6,000 / €6,000 / $6,000 / 60 000 တစ်လလျှင် Kr, တိုးတက်သောထီပေါက် winnings.TopSlotSite မေလ၏အမှု၌ မှလွဲ., သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာ, သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအဖွဲ့ဝင်များသည်ဤကန့်သတ်တိုးမြှင့်.